Igbo Mass Readings for December 25 2021, Uka Ututu Emume Omumu Kristi.
A mụtaara anyị Nwa nwoke. Ee, ọ bụ Nwa nwoke ka e nyere anyị; Onye ike ọchịchị niile nọ n’ubu. Aha a ga-akpọ Ya bụ: Onye Ndụmọdụ dị Egwu.
Chineke Nna anyị, I sitere n’ụzọ dị ịtụnanya doo mmadụ ebube mgbe I kere ụwa; bịakwa site n’ụzọ kacha ịtụnanya nye ya ebube ka ebube mgbe Ị zọpụta ya. Biko, otu o masịrị Ya bụ Nwa Gị iwere ọnọdụ mmadụ, meenụ ka anyị soro Yak eta oke n’ịbụ Chukwu nke Ọ bụ, Onye Gị na Ya dị ndụ na-achị.
Chineke nke ịhụnanya, Nna nke ụwa niile, ọchịchịrị n’elu ụwa enyela ohere maka ìhè nke Okwu Gị E Mere Ahụ. Biko, mee anyị ụmụ nke ìhè a, ka anyị jidesie aka ike n’okwu Gị, wee wetara ụwa ndụ nke Gị ọ na-atụ anya ya. Site n’Onyenweanyị.
Dinwenụ, biko nara onyinye anyị na-ebutere Gị na nnukwu oriri nke ụbọchị taa. Ọ bụ site na Ya ka anyị ji emeda Chineke obi n’ụzọ zuru ezu; ka anyị na Ya dịkwa na mma ọzọ. Biko, mee ka anyị fee Ya n’ụzọ kwesịrị ekwesị. Site na Kristi Onyenweanyị…
UKWE ORIRI NSỌ: Abụọma 97:3.
Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị.
Chineke Nna nke ebere, Onye Nzọpụta nke ụwa a mụrụ taa bụ onye ntọala nke ndụ anyị na Chukwu. Biko, mee ka anyị si n’aka Ya nweta ndụ ebighị ebi. Site na Kristi Onyenweanyị.
IHE ỌGỤGỤ NKE MBỤ 52:7-10
Isi Okwu: Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyịọụ.
Lee ka ụkwụ onye butere Oziọma si maa mma n’elu ugwu; onye na-ekwusa udo: na-ewetakwa obi añụrị; na-ekwupụta nzọpụta, bịakwa na-agwa Zayọn sị: “Chineke gị bụ eze.”
Gee ntị! Ndị nche gị eweliela olu ha elu na-etikọta mkpu ọñụ. Maka na ha ahụla Onyenweanyị ihu na ihu, ebe Ọ na-alọghachi na Zayọn. Ụnụ niile bụ ihe a lara n’iyi na Jerusalem, tikọtanụ mkpu ọñụ ọnụ; n’ihi na Onyenweanyị na-akasịndị nke ya obi n’ịgbapụta Jerusalem. Onyenweanyị agbawala ogwe aka Ya dị nsọ ọtọ n’anya mba niile. Akụkụ ụwa niile ga-ahụ nzọpụta Chineke anyị.
ABỤỌMA NA AZỊZA YA: Ps. 97:1-6, Aịz. 3.
Azịza: Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị.
1.Kweerenụ Onyenweanyị ukwe ọhụrụ n’ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Aka nri Yan a ogwe aka Ya dị nsọ ewetala nzọpụta. Azịza
2. Onyenweanyị emeela ka a mata nzọpụta Ya. O gosila ụwa niile ikpe nkwụmọtọ Ya. O chetala ezi okwu na ịhụnanya O nwere maka ụlọ Izrel. Azịza.
Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Ụwa niile tierenụ Onyenweanyị mkpu ọñụ. Kwupụtanụ na obi dị ụnụ mma.
3. Werenụ ụbọ akwara bụọrọ Onyenweanyị abụ ọma; werenụ ụda egwu mara mma. Fụọnụ opi ike, gbuọnụ ụja. Toonụ Onyenweanyị na Eze anyị. Azịza
IHE ỌGỤGỤ NKE ABỤỌ 1:1-6
Ihe ọgụgụ e wetara n’akwụkwọ Ozi e degaara ndị Hibru.
Isi Okwu: Chineke esitela na Nwa Ya gwa anyị okwu.
N’oge gara aga, Chineke gwara nna anyị ha okwu ugboro ugboro n’ụzọ dị iche iche, site n’ọnụ ndị amụma. Ma n’oge nke anyị, nke bụ mgbe oge nọ n’ọgwụgwụ ya, Ọ gwala anyị okwu site na Nwa ya, Onye O sitere na Ya mee ihe niile dị adị. Nwa Ya ahụ bụ Onye Ọ họpụtara ka O rite ihe niile n’ekpe.
Ya bụ ìhè na-enwu bam bam nke ebube Chineke, bụrụkwa kpọm kwem onyinyo Chineke n’ihe niile O ji bụrụ Chukwu. Ike dị n’iwu O tiri ka ụwa ji kwụrụ ebe ọ kwụụrụ. Ugbu a, ebe ọ bụ na O bibiela mmerụ nke njọ, O gala were ọnọdụ Ya n’eluigwe, n’aka nri nke ebube eze Chineke.
Ihe ọ pụtara ugbu a bụ na okwa e bugoro Ya akarịka nke e bugoro ndị Mmụọma, dịka aha a gụrụ Ya si karịa nke a gụrụ ndị Mmụọma.
O nwebeghị mmụọma Chineke gwara: “Ị bụ Nwa M; taa ka M mụtara gị.” Ma ọ bụ: “Aga M abụrụ ya Nna; Ọ ga-abụkwara M Nwa.” Ọzọkwa, mgbe Ọ kpọtara dị ọkpara Ya n’ụwa, Ọ sịrị: “Ka ndị mmụọm niile nke Chineke kpọọrọn Ya isi ala.”
Ụbọchị dị nsọ abịakwasịla anyị. Mba niile! bịanụ sekpuoro Onyenweanyị; n’ihi na taa, nnukwu ìhè achakwasala ụwa.
Ihe ọgụgụ nke a si n’Oziọma dị asọ nke Jọn dere
Isi Okwu: Okwu e mere Ahụ. O wee binyere anyị.
Okwu ahụ dị adị na mbụ. Okwu ahụ na Chineke dị. Okwu ahụ bụkwa Chineke. Ya na Chineke dị adị n’isi mbido. Ihe niile si na Ya dịrị. Ọ dịghị ihe ọ bụla dị adị, nke na-esighị na Ya dịrị. Ihe niile dị adị, sitere na Ya dị ndụ. Ndụ ahụ bụ ìhè nke mmadụ. Ìhè nke na-acha n’ime itiri, nke itiri na-apụghị imenyụ.
Ọ dị otu nwoke Chineke zitere, aha ya bụ Jọn. Ọ bịara ịgba akaebe; ịgbara Ìhè ahụ akaebe, ka mmadụ niile wee si na yak were. Ya onwe ya abụghị Ìhè ahụ, kama ọ bịara ịgbara Ìhè ahụ akaebe.
Okwu ahụ bụ ezi Ìhè ahụ na-enye mmadụ niile ìhè. Ọ bịara n’ime ụwa. Ọ nọkwa anọ n’ime ụwa nke siri na Ya bido, ma ụwa amataghị Ya. Ọ bịakwutere ndị nke Ya, ma ndị nke Ya anabataghị Ya.
Ma ndị niile nabatara Ya, ka O nyere ike ịbụ ụmụ Chineke; ndị niile kwere n’aha Ya, ndị ọmụmụ ha na-esiteghị n’ọbara mmadụ, ma ọ bụ n’ọchịchọ nke anụ ahụ, ma ọ bụ n’ọchịchọ nke mmadụ; kama o sitere na Chineke.
Okwu e mere ahụ, O wee binyere anyị. Anyị hụrụ ebube Ya; nke bụ ebube ahụ O ji bụrụ Sọ otu Nwa nke Nna; nke jupụtara n’amara na eziokwu.
Jọn bịara ka onye akaebe. O kwupụtara sị: “Lee Onye ahụ m kwuru sị: “Onye na-abịa na-azụ m akarịka m! N’ihi na O buru m ụzọ dịwa.
N’ezie, ọ bụ n’uju afọ ọma Ya ka anyị niile siri nweta amara kwuru amara. Ebe ọ bụ na e nyere iwu site n’aka Mosis; Amara na ezi okwu si n’aka Jesu Kristi bịa. Ọ dịbeghị onye ọ bụla hụrụ Chineke anya. Ọ bụ naanị otu Nwa Ya, onye dịkarịrị nsọ n’obi Nna; Ọ bụ Ya mere ka anyị mara Nna.
Categories Igbo Mass Readings, Igbo Christmas Readings Tags igbo-mass-readings-25-december-2021 Post navigation
Daily Mass Readings for July 1 2021, Thursday of 13th Week